🎼My Rising Star game🎸: I have reached level 20 — TrafficInsider
🎼My Rising Star game🎸: I have reached level 20
princekham in Blockchain Gaming •4days ago
This evening, I have reached level 20 after playingacouple of guitar lessons and some missions. What I just found out about music lessons is that it not only increases my skill but also gives me more experience points (xp: 120) in just one hour. And I found that the level bar increases as I gain experience (xp) through missions and music lessons.
Currently, I have 210 fans with 141 temporary drunk fans so I don't need to buyapeople card to perform "Saturday Headline" mission, which requires 300 fans. However, if the no decreases, I will have to buy one for higher level missions.
So far, I have performed 195 missions with 351 fans, 262 luck and 564 skills with 480 ego.
Next, maybe, I would like to try to buyapack of cards but I am not sure yet. Do you think I should try? And while I am writing this I am performing the "Saturday Headline" mission that can be done after level 20. And I am excited for higher level missions. Thank you.
ဒီညနေခင်းမှာပဲ ကျွန်တော် level 20 ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမနက်ခင်းပိုင်းမှာ music lessons ၂ ခု နဲ့ missions အချို့ လုပ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် music lesson လုပ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ သူက ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု skill ကို မြင့်တင်ပေးရုံတင်မကပဲ၊ အတွေ့အကြုံ (xp)ကို 120ထိ ပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကမှ သိလိုက်တာကတော့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေများလာလေ အပေါ်က level bar ဟာ တိုးလာလေဆိုတာပါပဲ။
လောလောဆယ်အထိတော့ ကျွန်တော် ယာယီပရိတ်သတ် ၁၄၁ ယောက်အပါ ပရိတ်သတ် ၃၅၁ ယောက်ရှိတာမို့ level 20 မှာ ပြုလုပ်ခွင့်ရမယ့် "Saturday Headline" mission ကို ပြုလုပ်ခွင့်ရနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ် အရေအတွက် လျော့သွားရင်တော့ people card ဝယ်ရပါမယ် ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိတော့ ကျွန်တော်ဟာ mission ပေါင်း ၁၉၅ ခုပြုလုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပြီး၊ ပရိတ်သတ် ၃၅၁ ယောက်၊ luck ၂၆၂၊ skill ၅၆၄ နဲ့ ego ကတော့ ၄၈၀ ရှိပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကပ် pack တစ်ခု ဝယ်ပြီး ကံစမ်းကြည့်မလားလို့ တော့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ ကော ဘယ်လို ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။ ဒီစာကို ရေးနေချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ level 20 ရောက်မှ လုပ်ဆောင်လို့ ရတဲ့ "Saturday Headline" mission ကို ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4 days ago in Blockchain Gaming by princekham
asterkame4days ago
I'm reading your game posts to understand this game!
princekham4days ago
I see. You can read my posts and there are good video about this game too. I started with this one
nilarwin4days ago
Saturday Headline Mission လုပ်နိုင်နေပြီပေါ့။မြန်တယ်လို့ ပြောရမယ် !LUV
@nilarwin(2/5) gave you LUV. H-E tools | discord | community | <>< daily
@princekham(3/4) gave you LUV. H-E tools | discord | community | <>< daily
callmemaungthan4days ago
Lev 20 တယ်မြန်ပါလား အကို !LUV !LOLZ
@princekham, I sent you an $LOLZ on behalf of @callmemaungthan
အစောကမှ level 20 ရောက်တာပါ။ သူက mission တွေကို နိုပ်ရုံပဲဆိုတော့ အပန်းမကြီးဘူးလေ။ !LUV !LOL
@callmemaungthan, I sent you an $LOLZ on behalf of @princekham
uthantzin4days ago
Level -20 တောင် ရောက်နေပြီလား...Good တယ်ဗျာအားပေးနေပါတယ်...!LOLZ
@princekham, I sent you an $LOLZ on behalf of @uthantzin
@princekham(4/4) gave you LUV. H-E tools | discord | community | <>< daily
@uthantzin, I sent you an $LOLZ on behalf of @princekham
@risingstargame(7/10) tipped @princekham (x1)
princekham tipped myothuzar (x1)
myothuzar4days ago
ကဒ်ဝယ်ဆော့ရင် level အမြင့်ရောက်တာ ပို မြန်တာလား
ဟုတ်ကဲ့။ ကပ်တစ်ချို့တော့လိုမယ်။ တစ်ရက် ၁၅နာရီ အနည်းဆုံး mission လုပ်နိုင်ဖို့ ပီဇာ energyboost ၂ ခုနဲ့ ရလာတဲ့ ပီဇာတွထည့်ဖို့ ပီဇာဗူးနှစ်ဗူးတော့ လိုပါမယ်။
ပြီးတော့ ဂီတသင်တန်းအတွက် အဆိုသင်တန်း တက်မယ်ဆိုရင် 50 Luck ရှိတဲ့ microphone ဒါမှမဟုတ် ဂီတာသင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင် 50 Luck ရှိတဲ့ ဂီတာ လိုပါမယ်။ level ၁၀ မှလိုမှာပါ။
လူကတော့ ပရိတ်သတ်လိုရင်လိုသလိုဝယ်တာပါ။ Rare card ထဲက skill က fan အရေအတွက်ထက် ပိုတဲ့ကပ်ကို ဝယ်သင့်ပါတယ်။
စုစုပေါင်း starbits 50000 လောက် တန်ဖိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ !PIZZA
ဟုတ်။ကျေးဇူးပါ အများကြီးပဲ ဖြေပေးတာ။
risingstargame 14 hours ago